Google godhi: Projeektii barataa kan addunyaa jijjiire - BBC News Afaan Oromoo
Google godhi: Projeektii barataa kan addunyaa jijjiire
Goodayyaa suuraa Kalaqa google
''Abbaa koo, yoo ati duute maal taanaa?'' ''An hin beeku mucaakoo. Kana namni beekulle hinjiru.'' ''Maaliif 'google' hingootuu?''
Dhugumatti waa'ee jireenya du'a boodaa nutti himuuf dandeettii gahaa yoo hin qabannellee, jechi google jedhamu kun mata duree haasaa namootaa erga ta'u jalqabe tureera.
'Google' waggoota kurnan lama hin caalle keessatti pirojektii barataa Yunivarsiitii Istaanfoord tokko irraa ka'e sadarkaa guddaa amma irra jirurra gahe.
Bara Google hin jirre, teknoloojiin marsariitii irra waa ittiin barbaadan 'Lycos' jedhamu daran rakkisaa ture.
Google kan hundeessan Laary Peej fi Seerjey Briin jalqaba jalqaba akka itti waa barbaadan fooyyee qabu kalaquuf yaada hin qaban ture.
Goodayyaa suuraa Seerjey Briin(Bitaa) fi Laary Peej(Mirga). Namoota lamaan 'google' kalaqan
Yaadni isaanii caalatti dhimma barnootaan kan wal qabatu ture.
Barnoota keessatti waraqaan qorannoo tokko barruulee namoota adda addaatiin waabefatamuun isaa amanamummaa isaa agarsiisa. Yeroo baayyee barruulee waabeffatamaniin waabeffatamuun ammoo amanamummaa guddaa dha.
Kanas sirritti kan hubatan Peej fi Briin, sadarkaa amanamummaa dhimma fuula marsariitii tokkoo irratti barreefamee beekuf, liinkii marsariitii idil-addunyaa hunda walitti fidee xinxaluu danda'u kalaquuf yaadan.
Kanuma hojiin isaan hojjetan. Haa ta'u malee, tartiiba kun itti hojjechuu malu keessa deebi'anii wayita xiinxalan, waan olaanaa fi waya'aa marsaritiirraa waa barbaachuuf nama gargaaru argachuu isaanii hubatani.
Kanumaan dafanii itti fufuudhaan Peejii fi Briin abbootii qabeeynaa hawwachuu jalqaban. 'Google's piroojektii barataa irraa gara kubbaaniyaatti jijjiirame. Kubbaaniyyaan kun amma addunyaa keessatti warra bu'aa gurguddoo biliyoona kudhaniin lakkaa'aman argamsiisan keessaa tokko.
Haa ta'u malee, waggoota murtaa'oo jalqabaa keessatti, Pejii fi Briin deebii isanii argachu isaanii utuu hin beekiin, maallaqa of harkaa qaban hunda kubbaaniyyaa kana dhugoomsuuf olchaa turan.
Saffisaa fi iftoomina
Google'n yeroo jalqbaatiif bara 2001 keessa, mala 'pay-per-click' ykn 'kaffalti beeksisaa cuqaasa irratti hundaa'e ifa tasise. Kana jechuun wayita namoonni karaa 'google' beeksisa tokko irratti cuqaasan, warri beeksifatu sun 'google'f kafalu jechuudha. Kaffaltiin google'f godhamu kunis tilmaamaan osoo hinta'iin qabatamaan namoonni beeksisa kana ilaalan erga baramaniiti.
Kunis tajaajila beeksisa gaazeexaa irratti ba'u caala, kanfaltiidhaan kan wayyu qofa osoo hin taane warri marsariitii, kanneen gaazeexaa irraa ilaalan caalaa bituudhaaf fedhii kan qaban ta'uun beekame.
Miidiyaaleen addaa addaas, daldala bifa haaraa kana irratti wal dorgomuun isaanii ammoo caalaatti faayidaa diinagdee guddaa google'f argamsiise.
Kalaqni teknooloojii barbaacha marsariitii 'google' dhugoomse kun, jireenya namootaa karaa hedduun geedarunsaas beekame.
Waggoota muraasa dura, namni McKiinseey jedhamu faayidaawwan mala marsariitii irra waa barbaaduutti fayyadamuun qabu tarreessee ture. Inni tokko yeroo qusachuusaati.
Qorannoon kun akka mirkaneessetti, odeeffannoo tokko argachuuf google irra barbaaduun, mana kitaabaa keessa barbaaduurra harka sadiin saffisa jedheera. Yeroo achi deemuuf fudhatu qusachuun alatti.
Akkasumas hojii yookin daldala intarneetii irraa argachuun, daayireektarii maxxanfamee irraa argachuu caalaa harka sadii oliin akka saffisu himameera.
McKiinseey qorannoo isaa keessatti, google hojii saffisiisuun biliiyoonni dhibbootaan lakkaa'amu dabalataan akka argamu godheera jedha.
Image copyright Bekele Atoma
Goodayyaa suuraa Google - Itoophiyaa - Afaan Oromoo
Olaantummaa google agarsiisaa dhufe
Wanni barbaadamu kami iyyuu haala salphaan akka argamu waan godheef, barbaachisummaan gabaa marsariitii irraa daran barbaadamaa ta'aa dhufee.
Kanaanis, maamiltoonni hundi meeshaa duraan salphaatti argachuu hin dandeenye argachuu danda'an. Hojii-uumtotaafis kalaqasaanii waltajjii irratti dhiheessan mijataa ta'ef.
Kan bitaniifis ta'e kan gurguraniif oduu gammachiisaa ta'e.
Google'n bittaa fi gurgurtaa marsariitii irratti taasifamu dhibbeentaa 90 to'achuu danda'e. Daldalli hedduun tajaajila qindaawaa google irraa argachuu danda'an kanaratti hirkachuu jalqaban. Hojii google kennuttis gammadaa dalagaa isaanii mana taa'anii ciminaan hojjechuu jalqaban.
Haala akkanaatiin gabaa to'achuun google kubbaaniyyoota isaan walfakkatan irratti dhiibbaa fide. Kunis olaantummaa google karaa waa barbaachuu irratti qabuu irraa kan ka'e ture.
Yeroo ammaatti google hunda caalaa kuusaa odeeffanno olaanaa kan qabudha. Kunis kubbaaniyyaan kun itti fufiinsaan dhaloota ammaatiifis ta'e kan itti aanuuf odeeffannoo fi beekumsa qindeessee biraan gahu ni mala jedhame amanama.